Akụkọ - Calacatta viola marble-nhọrọ ịhụnanya na okomoko
Calacatta viola marble-nhọrọ ịhụnanya na okomoko
Akụkọ - Calacatta viola marble-nhọrọ ịhụnanya na okomoko
Calacatta viola marble, dị ka ụdị marble ya pụrụ iche na agba na-enye marble a nke oge a na nke oge a, nke ọtụtụ ndị na-emepụta ụlọ na-ahụ n'anya.
Ọ bụ otu n'ime ndị ItalianCalacatta marble, nwere obere agba odo odo na nzụlite ọcha.A na-ekewa ya na Calacatta Viola Violet, ya mere a na-akpọkwa yaCalacatta violet marble.
Dị mma ma mara mma, dịkwa mma ọmarịcha.A na-ejikọta textures nkume dị elu nke ụwa na okomoko na ihe ịchọ mma dị iche iche n'ime ụlọ ahụ, na-egbukepụ egbukepụ na ịma mma nke ọ bụla ọzọ na-ejide onwe ya.Site na dum ruo akụkụ, dị ka ngwaahịa dị mma, nkọwa ọ bụla kwesịrị ịtụgharị uche na ekele.Calacatta viola marblega-emepụta ụdị ndụ mara mma nke achọsiri ike.
Calacatta viola marblenwere ụkpụrụ na-acha odo odo na-eru na udidi ọcha ya.Ụdị ahụ bụ ihe okike ma juputara na ịma mma dị mfe ma mara mma.Ọ dabara nke ọma maka minimalist, wabi-sabi, French, American, okomoko ọkụ na ụdị ụlọ ndị ọzọ.
Calacatta viola marble maka ogidi
Ugbu a, ihe ndị na-emepụta marble abụghị nanị ọgaranya na agba, kamakwa a na-eji nkà eme ihe na oghere ụlọ, nke na-egosipụta n'ezie ịma mma nke nkume marble a mara mma na ọdịdị ya.Ụdị marble na-acha ọcha sitere n'okike, jikọtara ya na nhazi kachasị mfe, bụ igodo dị ala ma dị nro na-emetụ aka.Calacatta viola marblea na-ahụkarị na nhazi nke ụlọ ndị dị elu.
Ụdị marble a pụrụ iche na-eme ka ọrụ ahụ nwee mmetụta siri ike nke oge a.Ọtụtụ ndị na-amasịCalacatta viola marblema mee ya ka ọ bụrụ tebụl iri nri na tebụl kọfị, ma tinye ya n'àgwàetiti ahụ na ndabere, n'ihi na ọ gaghị adị oke ọkụ, ma ọ pụkwara igosipụta ịdị mma nke ọma.Okpomọkụ, ihe ndị sitere n'okike na nhazi dị mfe ma mara mma, na-egosipụta ịdị ebube dị ịtụnanya nke okike na uto nke onye nwe ya.
Calacatta viola marble maka steepụ
Calacatta viola marble maka mgbidi
Calacatta viola marble maka countertop kichin
Calacatta viola marble maka tebụl n'elu
Calacatta viola marble maka countertop
Calacatta viola marble maka ime ụlọ ịwụ
Calacatta viola marbleụkpụrụ na-enye ụdị ịma mma nke okike okike, ọ bụ ihe pụrụ iche, ọ bụghị nke ejiji ejiji, ọ bụ ụdị ịma mma nke nkwupụta n'efu site na ịchọ mma marble.
Oge nzipu: Jun-08-2022
Ihe nrịbama granite na-acha anụnụ anụnụ, Granite odo odo, Gray Granite, Black Granite, Gray Gray dị ọkụ, Taịlị mgbidi Marble ọcha,